AKHRI:– DANEEYAYAASHA CAALAMKA OO MURRASHAXIINTA UGU BAAQAY INAY AQBALAAN NATIIJADA DOORASHADA | Maalmahanews
AKHRI:– DANEEYAYAASHA CAALAMKA OO MURRASHAXIINTA UGU BAAQAY INAY AQBALAAN NATIIJADA DOORASHADA
October 5, 2017 - Written by admin
Hargeysa (Maalimahanews.com)- Daneeyayaasha caalamka ee Jamhuuriyadda Somaliland ka taageera dimuqraadiyada, ayaa war-murtiyeed wadajir ah oo ay ka soo saareen ku sheegay in qaan-gaadhnimada geedi-socodka dimuqraadiyada Somaliland ay muujin doonto daahfurnaanta iyo nabadgelyada ay u qabsoonto doorashada madaxtooyada ee muddaysan 13 ka November 2017-ka.
Danjireyaal iyo wakiillo ka kala socday Belgium, Denmark, Midowga Yurub (EU),Finland, France, Netherlands, Sweden, UK iyo Maraykanka, ayaa booqasho ku yimid Somaliland, waxaanay balanqaadeen inay ka go’an tahay inay Somaliland kala shaqeeyaan qabashada doorashada shanta toddobaad ka hadheen. Waxa kaloo ay ku baaqeen in la xurmeeyo shuruucda iyo xeerarka doorashada fooda innagu soo haysa.
War-saxaafadeed ay shalay ka soo saareen Hargeysa, waxa soo akhriyay oo soo turjumay Tifaftiraha Guud ee Wargeyska Dawan, Cumar Maxamed Faarax.
“Wefti sare oo ka socday daneeyayaasha caalamka ayaa shalay booqasho ku yimid magaalada Hargeysa ee Somaliland. Weftigan oo ka koobnaa danjireyaasha Denmark iyo Midowga Yurub oo ay weheliyeen wakiillo ka kala socday dawladaha Finland, France, Netherland iyo UK.
Weftigu waxay kulamo la yeesheen Madaxweynaha Somaliland, Guddida Doorashooyinka iyo saddexda murrashax madaxweyne ee xisbiyada. Waxay weftigu u xaqiijiyeen madaxda Somaliland inay taageersan yihiin in doorashada madaxtooyada ee muddaysan 13-ka November ay noqoto mid u qabsoonta hannaan daah-furan oo loo dhan yahay. Waxaanay murrashixiinta ku dhiirigeliyeen inay aqbalaan natiijada doorashada.
Daneeyayaashu waxay tilmaameen in hawlaha u diyaar-garowga doorashadu ay Komishanku u wadaan si wanaagsan, isla markaana dhammaystireen diiwaan-gelintii codbixiyayaasha, qaybintii kaadhadhka codbixiyayaasha, shahaado siinta murrashaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo digreetadii madaxweynuhu soo saaray 30-kii September 2017, ayaa intuba ah tallaabo muhiim ah oo la gaadhay. Fulinta digreetooyinkan iyo u hoggaansanaanta xisbiyada ee xeerka anshaxa iyo in si isku mid ah ay fursad ugu helaan xisbiyadu warbaahinta ayaa lagama maarmaan ah.
Weftigu waxay ku guubaabiyeen xisbiyada, komishanka iyo ururrada bulshada inay shanta toddobaad ee ka hadhay doorashada sii wadaan inay ka shaqeeyaan sidii ay u dhici lahayd doorasho madaxtooyo oo nabdoon, loo dhan yahay isla markaana ah mid daahfuran.
Waxaannu u soo jeediyay saaxiibadayada Somaliland inay ixtiraamaan shuruucda jira una hoggaansamaan go’aamada ay soo saaraan Hay’adaha sharciga ku dhisan. Waxa muhiim ah in ololaha xisbiyadu noqdo mid la xidhiidha mowduuc, iyadoo aanay jirin cabsi gelin, waana in si isku mid ah loo wada adeegsado warbaahinta dawladda.
Doorka ururrada bulshada iyo Saxaafaddu waxay awood u siinaysaa codbixiyayaasha in ay iyagoo xog haya wax dooran karaan, isla markaana waxay qiimeynayaan siyaasadaha murrashaxiinta madaxtooyada iyo siday muhiim u tahay inay ka dhigaan xisbiyada iyo hay’adaha Somaliland kuwo lagula xisaabtami karo balanqaadyada ay sameeyaan.Gaar ahaan iyadoo Komishanka doorashooyinku isha ku haynayo.Goobjoogayaasha doorashadu waxay gacan ka geysan karaan kalsoonida geedi-socodka.
Ururrada bulshadu waxay isku dubo-ridayaan illaa 620 goobjoogayaal maxali ah oo ay wehelin doonaan 60 kormeereyaal madax-bannaan oo waayo-arag ah oo ka socda caalamka.
Daneeyeyaasha beesha caalamku waxay u iftiimiyeen Somaliland sida nabadda, iyo daahfurnaanta ay ku qabsoonto doorashada madaxtooyadu 13ka November 2017-ka oo ay aqbalaan xisbiyada oo dhami isla markaana sida ugu macquulsan ee ugu dhakhsaha badan loo la qabto doorashooyinkii Baarlamaanka iyo Dawladaha hoose ay tusmayn doonto qaan-gaadhnimada hannaanka dimuqraadiyadeed ee Somaliland. Waxaanay aasaas u noqonaysaa in la gaadho horumar dhaqaale bulsheed oo faa’iido u leh shacabka Somaliland. Daneeyayaasha caalamku waxay ka taageeraysaa Somaliland qabashada doorashada madaxtooyada.”